Abafundi beziFundo zokuLingisa bagabisa ngevidiyo yabo ngeCOVID-19.
Abafundi bezifundo zeShashalazi nezokuLingisa benze ividiyo efundisayo nechithisa isizungu ngegciwane I-COVID-19 etholakala ku-YouTube.
Le vidiyo yemizuzu amathatu nohhafu ihlinzeka ngemininingwane ebalulekile ngokugada ukuzivikela ekutholeni igciwane njengokugeza izandla imizuzwana engama-20 nokuthimula noma ukukhwehlelela emgodini wendololwaneni.
Labafundi abayisithupha abayenzile – uMnu Tshepang Sehlabaka, uNks Simamkele Sukanazo, uNks Samkelisiwe Ndimande, uNks Vukile Cebo Ngwenya, uMnu Ayanda Jali, noNks Nompumelelo Moyo – baqambe iculo nomdanso ohehayo wevidiyo.
Othisha uDkt Miranda Young-Jahangeer noNks Ongezwa Mbhele, abacela abafundi be-onazi ukuthi baqambe le vidiyo nge-COVID-19, yibona abaqala lo mkhiqizo odle ngokufundisa.
‘Bengifuna ukuthi abafundi basebenzise izindlela ezaziwayo zeshashalazi ukudlulisa umyalezo ngegciwane nokuthi iziphi izinyathelo zokuvikela umphakathi ongazenza,’ kusho uMbhele. ‘Abafundi bayadansa, bafake imisindo enjengokushaya ihlombe kanti ngaleyo ndlela bafaka ubuchule bokulingisa. Abafundi bakufunda loku onyakeni wabo wesibili kanti bakwazi ukuthi basebenzise lesi sifundo ukubhekana nezinkinga zezenhlalo.’
Ngaphandle kokubalula izindlela zokuqikelela ukungasabalali kwegciwane, le vidiyo izama ukulungisa okungamanga nge-COVID-19. “Le vidiyo ihlose ukufundisa ngobhubhane kodwa futhi sisebenzise imidanso yesimanje ukudlala ngesihloko esinzima nokuthi sihambisane nentsha,’ kusho uJali.
Abafundi benze lo mdlalo weshashalazi ngesonto elandulela ukumiswa kwezinto ezweni. ‘Abantu basincomile ngokuphumela obala, senza umsebenzi wobuciko ngale nkinga. Le vidiyo ikhuthaza abanye ukuthi benze iziqephu eziqoshiwe ngalento,’ kusho yena. ‘Sethemba ukuthi le vidiyo yandisa ulwazi, yenze abantu bathathe izinyathelo ezifanele ukunciphisa ukubhebhetheka kwegciwane.’
Ukubukela le vidiyo, cindezela lapha: https://www.youtube.com/watch?v=0eWTF_W9Pqc
Igama lombhali: ngu-Melissa Mungroo
Isithombe: ngu-Miranda Young-Jahangeer